Toxoplasmosis - Loza, fisorohana sy famantarana ny aretina
Toxoplasmosis | Ny biby dia mihinana fahasalamana
Ahoana ny toxoplasmosis amin'ny saka
Ny fomba fiasan'ny toxoplasmosis amin'ny olombelona
Ny toxoplasmosis dia mety amin'ny vehivavy bevohoka
Toxoplasmosis dia aretina mifindra izay tena atahoran'ny tompon-jaza bevohoka. Satria ny otrikaretina tompon'andraikitra amin'ny aretina, izay mitondra ny anarana Toxoplasma gondii, dia mitondra ny saka ao an-toerana amin'ny fahasamihafan'ny aretina isan-karazany. Ao anatin'ny cyber-n'ny infection dia azo ampitaina amin'ny olona ihany koa. Ho an'ireo zaza bevohoka sy ny zaza tsy ampy taona, ho an'ny olona manana rafitra fiarovan-tena marefo, ho an'ny zazakely, ny zaza amam-behivavy ary ny zokiolona, ​​dia miteraka fahasahiranana ara-pahasalamana avo lenta izany satria mety hitranga tampoka izany.
Ny fampandrosoana ny toxoplasmosis ny toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii dia parazita eran-tany izay afaka mihamaro amin'ny fomba samihafa. Ohatra, ny fifindrana mivantana avy amina toeram-piasana iray dia azo atao.
Fampahalalana mikasika ny toxoplasmosis
Izany matetika ny saka. Raha misy biby voavono efa voavolavola miaraka amin'ny gazoala voapoizina, dia azo avy amin'ny saka hafa izany.
Mandritra ny fizotry ny fitsaboana dia alefa ireo sporozoite tsy mavitrika, izay mivezivezy amin'ny rindrin'ny tsinay, miditra ao amin'ny ra na ny lymph ary dia entina amin'ny taova sy taova isan-karazany.
Any, ny sporozoites ao amin'ny vaksinin'ny sela ao amin'ny vatana dia afaka mamerina asex. Trophozoites miseho. Noho ny fivavahan'ny orinasa dia manjary haingana ireo mpanani-bohitra, mitarika antikôla izy io ka mahatonga azy ireo ho tafiditra amin'ny fitomboan'ny taova. Ao anatin'ireny cysts ireny anefa, dia mihamaro indray ny mikraoba. Antsoina hoe sporozoites ankehitriny izy ireo.
Ny "fomba" an'ny tosidra toxoplasmosis
Aorian'ny andro 18, ny sporozoites dia miverina ao anaty tsina ary mihamitombo haingana. Ny ampahany amin'ny taolam-paty vaovao dia voahasina ao amin'ny oocysts ary mivoaka ao amin'ny gazo. Azo alaina ho an'ny tompon'andraikitra vaovao izany.
Na izany aza, raha tafiditra ao anatin'ilay fiarandalamby ny mpihazakazaka iray, dia lasibatra mikarary mikarama izany, izay mitondra ilay saka ho azy. Ny dingana hafa amin'ny fivoaran'ny germs dia mitovy amin'ny famaritana efa voalaza. Ny fihinanana rano maloto koa dia mety hahatonga ilay saka ho voan'ny aretina.
Ny fahafahana fahatafintohinana fahatelo dia ny fihodinan'ny mpanelanelana iraisam-pirenena. Eto dia ny famindrana ireo mikraoba avy amin'ny mpanelanelana iray ho an'ny iray hafa. Izany dia azo atao, ohatra, amin'ny fihinanana henam-bolo voakolokolo amin'ny Toxoplasma gondii. Azo atao koa ny mamindra ny mikraoba avy amin'ny reny amin'ny alalan'ny mofomamy ho any amin'ny zaza tsy ampy taona.
Tsy ny saka rehetra voan'ny toxoplasmosis amin'ny toxoplasma gondii. Fa miankina amin'ny dingana arahina ny mikraoba.
Raha voan'ny aretina amin'ny endometrialy farany ilay aretina, dia mihalalina ny aretina manodidina ny 16 isan-jaton'ny biby. Raha miditra ao amin'ny vatana ny mikrôba amin'ny alàlan'ny famantaranandro iraisam-pirenena, dia farafaharatsiny 97 isan-jaton'ny saka no marary.
Saka toy ny biby an-trano
Matetika dia tsy misy marika famantarana ny marary amin'ny aretina. Mahalana sy mandritra ny dingana fampielezana ny mikraoba ao amin'ny tsinay dia mety hitera-doza sy / na ny fery.
Raha misy fiantraikany eo amin'ny taova ny taova, ny kohaka, ny orona mihetsiketsika, ny fofonam-bava, ny motera na ny aretin'ny neurolojia dia mety hitranga arakaraka ny habetsahan'ny aretina. Raha tratran'ny aretina, ny fahalemena ary ny tanora dia mety ho faty ny aretina.
Vantany vao voavaha ny aretina, dia matetika no voan'ny kanseran'ny toxoplasmosis mandritra ny androm-piainany ny saka. Ny biby malemy ihany no mety ho lasa aretina mitaiza.
Matetika no tsy misy soritr'aretina ny aretina toxoplasmosis rehetra. Na izany aza, ny aretina dia mety hipoitra ary hipoaka volana na taona monja taorian'izay. Ny ampahan'ny 10 isan-jaton'ireo izay voakasik'izany dia mampiseho ny soritr'aretina. Mety ho tazom-pahalemem-panahy, kanserany ary voka-dratsin'ny vatana na ny lymph nopotehina. Ny fitsaboana ny aretina amin'ny olona salama tsara dia tsy voatery.
Raha mihamalemy ny organism, dia mety hiteraka fahasimban'ny taova izy io. Ny atidoha dia matetika no atidoha, ka noho izany dia mety hitranga ny paralysis na ny fiovana. Azo atao ihany koa ny lung na meningitis, izay mety ho tandindonin-doza. Toy izany koa ny zaza amam-behivavy sy ny olon-dehibe. Noho izany, ny fitsaboana ireo vondrona ireo dia voalaza.
Ny vehivavy izay efa voan'ny tsindrona toxoplasmosis dia manana antikôlôjia amin'ny voka-dratsiny. Raha tsy izany, dia mampidi-doza ny areti-mifindra, indrindra amin'ny roa ampahatelon'ny bevohoka, satria mety hitarika ho amin'ny fijangajangana sy ny fahavoazana lehibe ho an'ny zaza ao am-bohoka izany.
Ohatra, mety hitranga ny fo, ny havokavoka na ny fahasimban'ny atidoha. Ny fitsaboana mivantana ny renim-pianakaviana dia ilaina maika mba hahitana ny vokany maharitra. Izany dia tanterahan'ny fitsaboana mandalo amin'ny fotoana maharitra, mandra-pahatapitry ny fitondrana vohoka.
Mba hisorohana ny otrikaretina dia tokony hohalavirina ny fihinanana henan-tsakafo sy ny fako. Ny tompon'ny Cat dia tsy maintsy mikarakara fa ny biby dia tsy manana fidirana mivantana amin'ny tohatra. Ny fanadiovana tsy tapaka ny vata fandoroana ary ny famoahana tsy misy mampidi-doza ny vatany dia miantoka fa ny cyber-infection rehetra dia tapaka.
Raha ilaina ny fihinanana saka, dia tokony hokarakaraina amin'ny ankapobeny ny fikarakarana. Anisan'izany ny fanimbana tsy tapaka ny toerana mitokana sy ny manodidina azy. Ankoatr'izany, ny saka dia tsy tokony hahazo sakafo. Rehefa tapaka ny biby dia ilaina ny manasa tanana. Tsy tokony havelan'ny saka ny saka ao am-pandrian'ny tompony. Indrindra indrindra fa ny ankizy dia tokony hampianarina ireo fitsipi-pitondran-tena ireo raha mbola azo atao.
Pejy fandraisana saka
Mandeha miaraka amin'ny alika | Pets vacation
Alika amin'ny ririnina Pets